EyeThupha 1, 2018 admin
Bank owayevunyelwe imikhosi Korean crypto Bithumb exchange ukukhubaza akhawunti ezintsha
Ukuqala namhlanje Agasti 1st, Bithumb, omnye eKorea 'enkulu ezine' zingxoxo, into yokukhutshwa engasekho akhawunti ezintsha enembonakalo yenyani kubathengi ngenxa yokungabikho neqabane logcino. Bithumb uthe ngumkhenkce akayi kuba nempembelelo abaxumi abasele akhawunti yenyani kwi exchange esetyenziselwa iidiphozithi kunye notsalo nge-akhawunti zebhanki ezinxulumene. ngokuba umongo, nabalawuli South Korean kunyanzeliswa ukuba cryptocurrency urhwebo kuvunyelwa kuphela kubatyali xa igama lazo kule akhawunti yekhompyutha zabo-ekhutshwe ebhankini idibanisa ukuba igama labo Ingxelo exchange cryptocurrency. Ngakho, ukutshintshiselana cryptocurrency kufuneka kwakhona ukuba bavuselele iikhontrakthi zabo kunye neebhanki qho emva kweenyanga ezintandathu.
Igosa elivela Nonghyup Bank wathi: "Senze isigqibo ukuba bahlaziye ikhontrakthi kuba Bithumb usenalo iingxaki ekukhuseleni abathengi kunye nolwazi nasekunqandeni imali ngokungekho semthethweni." Ngenxa yoko, Bithumb okuseleyo njengomsebenzisi kuphela phakathi eKorea 'enkulu ezine' ukutshintshiselana ngaphandle intsebenziswano zebhanki akhawunti virtual.
KPMG: mali Blockchain in US kulo nyaka sele igqithile iyonke 2017 xa
Utyalo-mali kwishishini blockchain i ichuma kwi US, ngoku ka “Big Four” Ukuhlola siqinile KPMG. Ishicilelwe lo ngoLwesibili, yenkampani “Ubume Fintech 2018” Ingxelo ithi utyalo-mali zemveli kwiinkampani blockchain US-based kwisiqingatha sokuqala kulo nyaka sele lidlule Iyonke 2017. Lo mzobo encomekayo isiqingatha-ngonyaka kwaye ngokuyinxenye ukhokelwa $ 100m + imali ngeenxa afunyenwe crypto siqalo yotyalo Circle Finance Internet.
KPMG US Iinkonzo zeMali Digital kunye Fintech Lead Safwan Zaheer uthe “kukho ngaphezulu VC ekhoyo ngaphezu amathuba ukutyala, uphawu ukukhula okukhulu kwisithuba. Ukuthi ngqo, notyalo mali blockchain kabini kwisiqingatha sokuqala 2018 kuthelekiswa ne 2017. Blockchain unakho yokuguqula ukubhankisha kwaye ukuba iinkqubo zebhanki babeza kwakhona namhlanje babeya isekelwe blockchain… ukusebenza abasingethe blockchain ukunceda ukusebenza yokubopha ngaphakathi kumaziko zemali.”
Wall Street uphando ngokuqinileyo Fundstrat ngoku yamkela Bitcoin njengoko indlela yokuhlawula
Le nkampani yophando investment Wall Street, Fund Trat, ngoku wamkela intlawulo Bitcoin nge Bitpay. Le nkampani ijonge ukwenza intlawulo lula ukuba abathengi zabo, ingakumbi ezo engaphandle US, ngokususa “les of translation lwemali.” Thomas Lee, Fundstrat kaThixo Managing Partner & umhlaziyi renound cryptocurrency wathi “Fundstrat wafumanisa ukuba ukwamkela iintlawulo nge BitPay kuba kakhulu lula, ngokukhawuleza kwaye ibiza ngaphantsi ezintambo yebhanki.”
Ufune ukuba “yokuqala ngokuqinileyo uphando ukuqala ukwamkela imali crypto evela kubaxhasi”, i Bitcoin ukhetho intlawulo iza kufumaneka kubo bonke abaxhasi Fundstrat kaThixo, ezibandakanya abatyali yeziko, abacebisi ubutyebi, imali yomhlalaphantsi, kunye nabantu eliphezulu umholo. Ekugcineni, le nkampani uqinisekile ukhetho intlawulo entsha iya “zingadli kuyabiza, ukudluliselwa wire elukhuni cross-umda kwaye ufumane okanye uthumele iintlawulo ngamazwe ngokuchanileyo epheleleyo, lwelahleko ebangelwa lurhwaphilizo zero kunye nokuhlaliswa bank ngokukhawuleza.”
$10.7T umphathi asset Northern Trust ivula iinkonzo zemali Bitcoin imali uthango
Iinkonzo zemali ezinkulu Northern Trust, eyona 486th kwi Fortune 500 uluhlu iinkampani ezinkulu US, engenise ecosystem cryptocurrency. Ingabinani nyaka-129 ubudala eChicago-based, leyo tiendlekela kubatyali zeziko, iinkampani, kunye nabantu eliphezulu umholo, sele iqalile ukuvula ezinye iinkonzo zayo cryptocurrency mali uthango ngoxa ukufuna ukuba bangazihlanganisa njani ubugcisa blockchain zibe inkululo yayo yabucala.
Northern Trust Kuxelwe esebenza 3 "Imali uthango esiqhelekileyo" ukuba sesiqale echwechwa ukudibanisa utyalo cryptocurrency nezikhundla zawo njengoko sifuna ukuzuza ubhenciso ukuya abanazo kodwa echumayo crypto yemarike. Northern Trust elingaba $10.7 sezigidi zezigidi ezi-asethi phantsi nokugcinwa nokuphathwa, ngokuvumelana website yayo.
Top Bloomberg umhlaziyi identifi ...
Nceda usazise ukuba TH into ...
Post Previous:Blockchain News 31.07.2018
Post Next:Blockchain News 02.08.2018